Sida Loo Quudiyo Qoraaladaada Blog-ka ee WordPress Adigoo ku Tag Leh Qaabka Ololahaaga Firfircoon | Martech Zone
Sida Loo Quudiyo Boostada Blog-gaaga ee WordPress Adigoo ku Sug-gale Qaabka Ololahaaga Firfircoon
Isniin, April 11, 2022 Isniin, April 11, 2022 Douglas Karr
Waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan u wanaajin lahayn qaar ka mid ah safarrada iimaylka ee macmiilka kuwaas oo kor u qaada noocyo badan oo badeecado ah WordPress goobta. Mid kasta oo ka mid ah ActiveCampaign Qaababka iimaylka ee aanu dhisayno ayaa si heersare ah loogu habeeyey badeecada ay horumarinayso oo ay ku siinayso waxa ku jira.
Halkii aan dib u qori lahayn wax badan oo ka mid ah waxyaabaha mar hore si wanaagsan loo soo saaray looguna habeeyey barta WordPress, waxa aanu ku dhex milmay boggooda email-kooda. Si kastaba ha noqotee, balooggoodu wuxuu ka kooban yahay badeecooyin badan si aan u shaandheyno quudinta mid kasta oo ka mid ah qaab-dhismeedyada annagoo isku darka kaliya dhejinta baloogga ee lagu calaamadeeyay badeecada.
Tani waxay tilmaamaysaa muhiimadda ay leedahay calaamadaynta maqaalladaada! Marka la calaamadeeyo maqaalladaada, aad bay u fududahay in la waydiiyo oo lagu daro macluumaadkaaga aaladaha kale sida iimaylka.
Quudinta Tag ee WordPress
Haddii aadan horay u ogaanin, WordPress wuxuu leeyahay nidaam quudin oo aad u adag. Waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso in goobtaadu ku kooban tahay quudintaada hal blog. Maaha… si fudud ayaad u soo saari kartaa qayb-ku-salaysan ama xataa quudin-ku-salaysan summada goobtaada. Macmiilkeena tusaale ahaan waa Qasriga Royal, iyo labada qaab ee la sameeyay waxaa loogu talagalay Tuubooyinka kulul iyo Haamaha sabbaynaya.
Qoraaladooda blog-ka looma kala saarin nooca badeecada, sidaa awgeed waxa aanu isticmaalnay summada. Jidka permalink ee helitaanka quudintaada waa URL-kaaga blogka oo ay ku xigto sumadda slug iyo summadaada dhabta ah. Marka, Royal Spa:
Maqaallada Royal Spa ee loogu talagalay Tubbooyinka kulul: https://www.royalspa.com/blog/tag/hot-tubs/
Maqaallada Isbaabka Royal ee Loogu Talogalay Taangiyada Sabaynta: https://www.royalspa.com/blog/tag/float-tank/
Si aad u hesho Syndication Xaqiiqda FududRSS) feed Mid kasta oo ka mid ah, waxaad si fudud ugu dari kartaa / quudin kartaa URL:
Royal Spa Blog Feed: https://www.royalspa.com/blog/ quudin/
Maqaallada Royal Spa ee loogu talagalay Tubbooyinka kulul: https://www.royalspa.com/blog/tag/hot-tubs/ quudin/
Maqaallada Isbaaska Royal ee Loogu Talogalay Taangiyada Sabaynta: https://www.royalspa.com/blog/tag/float-tank/ quudin/
Waxa kale oo aad tan ku samayn kartaa su'aal:
Maqaallada Isbaaska Royal loogu calaamadeeyay Tubbooyinka kulul: https://www.royalspa.com/blog/?tag=tuubyada kulul&feed=rss2
Maqaallada Isbaaska Royal loogu calaamadeeyay Haamaha Sabaynta: https://www.royalspa.com/blog/?tag=float-tank&feed=rss2
Waxaad xitaa sidan u waydiin kartaa tagsyo badan:
Maqaallada Isbaaska Royal ee Loogu Talogalay Taangiyada Sabaynta iyo Tubooyinka Kulul: https://www.royalspa.com/blog/?tag=taangiga sabayn,tubbada kulul&feed=rss2
Haddii aad isticmaalayso qaybaha, waxaad isticmaali kartaa qaybta slugs (oo ay ku jiraan qayb-hoosaad) iyo sidoo kale tags… halkan waa tusaale:
Waxaad arki kartaa sababta ay tani faa'iido u leedahay markaad dib u soo celiso nuxurka dhexdhexaadinta kale. Waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan macaamiisheena inay ku daraan maqaaladooda wargeysyadooda, iimaylada xayaysiinta, iyo xitaa iimaylada macaamilka ah. Waxyaabaha dheeraadka ah waxay kobcin karaan iimaylkooda, iyagoo leh faa'iidooyin dhowr ah:
Qaar ka mid ah bixiyeyaasha sanduuqa boostada algorithms meelaynta sanduuqa aad uga mahad celiso qoraalka badan ee ku jira iimaylada.
Maqaallada dheeriga ah ayaa aad u khuseeya mawduuca, kordhinta hawlgelinta macaamiishaada.
Iyadoo laga yaabo inaysan ku toosin macaamiishaada wacitaanka ficilka iyo ujeedada koowaad ee iimaylkaaga, waxay ku siin kartaa qiimo dheeraad ah iyo Iska yaree hoos u dhigida macaamiishaada.
Waxaad maalgelisay nuxurkaas, markaa maxaad dib ugu celin weyday kordhinta soo celinta maalgashiga?
Kudar RSS Quudinta Ololaha Firfircoon
Ololaha ActiveCampaign, way fududahay in lagu daro RSS Feed:
FurCampaign Active oo u gudub Ololayaasha> Maamul Hababka.
Fur template jira (adigoo gujinaya), Soo deji Template, ama guji Samee Template.
Mid ka mid ah liiska gacanta midig, dooro Geli> blocks> RSS feed.
Tani waxay furaysaa Dhisaha Quudinta RSS daaqada aad ka geli karto ciwaanka quudintaada oo aad ku eegi karto quudinta:
Habee adiga Faallooyinka aqristaha. Xaaladdan oo kale, waxaan kaliya rabaa cinwaan fudud oo ku xiran iyo sharaxaad gaaban:
Hadda waxaad arki doontaa Ku quudi qaabkaaga iimaylka, halkaas oo aad ka beddeli karto qaabka sida aad rabto.
Qaybta ugu fiican ee habkan ayaa ah in aan hadda loo baahnayn in si isdaba joog ah loo cusboonaysiiyo waxa ku jira iimaylada iyo safarrada marka aad sii wadato in aad ku daabacdo macluumaad cusub bloggaaga.
Shaacinta: Anigu waxaan ku xirnahay ActiveCampaign iyo shirkadaydu waxay ka caawisaa macaamiisha horumarsan WordPress horumarinta, isku-dhafka, iyo istaraatiijiyada otomaatiga ah ee suuq-geynta iyo fulinta. Nagala soo xidhiidh Highbridge.
Tags: ActiveCampaignblog tagsquudinta qaybtaquudinta caadadaEmail Marketingfeedrun ahaantii si fudud syndicationIsboortiga boqortooyadaRSSrss feedRSS feed dhiserss si aad u soo dirtois-biirintatag ku quudtagistaWordPresswordpress feedwordpress tag feed
Sida Loo Daabacado Shopify Blog-gaaga ee Klaviyo Qaabka Iimeylkaaga
UPS API Endpoints iyo Tusaalaha Koodhka Imtixaanka PHP